Zoo 2: Animal Park 1.23.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.23.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Zoo 2: Animal Park
Zoo 2: Animal Park ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တိရစ္ဆာန်ရုံ 2: တိရိစ္ဆာန်ပန်းခြံ - သင်၏အံ့သြဖွယ် 3D တိရစ္ဆာန်ရုံ
အခြေအနေကဆိုးရွားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ, သင့်အကြီးအ-အဒေါ်ဂျိုးဇက်သူမ၏နည်းနည်းဝါသနာတိရစ္ဆာန်ရုံ၏စောင့်ရှောက်မှုခံယူလေ၏။ အခုတော့သူမလွန်ရဲ့အကြောင်း, တိရိစ္ဆာန်ရုံပိတ်ထားခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံ၏ကံကြမ္မာသင့်လက်၌တည်ရှိသည်! သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြဖို့နှင့်တိရိစ္ဆာန် Park ကကယ်တင်! မြို့တော်ဝန်အမှုအရာဝန်းကျင်ကိုဖွင့်ရန်သင့်အား 48 နာရီပေးထားတယျ။ အချိန်ရဲ့သံတစ်ချက်။ သင့်ရဲ့အင်္ကျီလက်တက်လှိမ့်ပုံ, ထိုပူးတွဲ scrubbing start, ထိုချစ်စရာနည်းနည်းဆိတ်များနှင့်ယုန်အစာကျွေးနှင့်သင့်တိရစ္ဆာန်ရုံအသစ်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များရယူဖို့။
အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့တိရိစ္ဆာန်ဂိမ်း "တိရစ္ဆာန်ရုံ 2: တိရိစ္ဆာန်ပန်းခြံ" ဟုလောလောလတ်လတ်သည့်ဒင်္တိရစ္ဆာန်ရုံညွှန်ကြားရေးမှူး၏အခန်းကဏ္ဍကို၌သင်တို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ချစ်စရာစိတ်ကူးများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြံစည်မှုပွေီးမှတန်ချိန်နှင့်အတူတစ်ဆုတ်ထားတာတိရစ္ဆာန်ရုံဂိမ်းဇာတ်လမ်းကိုသို့ငုပ်။
တိရစ္ဆာန်ရုံခြင်း simulation နှင့်သူဌေးကြီးဂိမ်း၏အမှန်တကယ်ထူးခြားသောပေါင်းစပ်ရှာဖွေပါ။ တစ်ရောင်စုံနဲ့မေတ္တာနဲ့အသေးစိတ်ဂိမ်းကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းပါ။ ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ Feed, သူတို့ကိုဂရုစိုက်သူတို့နှင့်အတူကစား။ "တိရစ္ဆာန်ရုံ 2: တိရိစ္ဆာန် Park က" chock-အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် options နဲ့ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ဒီတစ်ခု-of-a-ကြင်နာတိရစ္ဆာန်ရုံဂိမ်းပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်:
ဖျော်ဖြေမှု Quest များနှင့်တာဝန်များကိုနှင့်အတူ🐾တစ်ဦးကကြွယ်ဝတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
🐾ပူးတွဲနှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး - garrulous ဆိတ်ထီးကိုကျော်အပျော်အပျက်ပန်ဒါထံမှ lordly ခြင်္သေ့ရန်
တိုင်းအဆင့်အထိတက်နှင့်အတူသော့ဖွင့်🐾နယူးသူဌေးကြီး features တွေနဲ့ပစ္စည်းများ။ ပန်းပွင့်ချုံများနှင့်သစ်ပင်, ပူးတွဲ, စျေးဆိုင်, အိမ်သာနှင့်အဆောက်အဦ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ခင်းကျင်းခံစားကြည့်ပါ
🐾မတ်ေတာရှိစှာကာတွန်းကားသတ္တဝါများနှင့်အထင်ကြီး 3D ဂရပ်ဖစ်
"တိရစ္ဆာန်ရုံ 2: တိရိစ္ဆာန်ပန်းခြံ" အဖြစ်အထင်ကြီးတိရစ္ဆာန်ရုံဂိမ်း setting ကိုမှပယ်သင်သည် whisks ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ်။ အန်တီဂျိုးဇက်ရဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံ Save! မန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ပရဒိသုထဲသို့နှိမ့်ချတိရစ္ဆာန်ရုံလှည့်။ ထူးခြားသောအချိုးအစား၏တိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းပျော်စရာခံစားရသည်။ ယခု app ကို Download လုပ်ပါ!
Zoo 2: Animal Park အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Zoo 2: Animal Park အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Zoo 2: Animal Park အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Zoo 2: Animal Park အား အခ်က္ျပပါ
marcoshk စတိုး0192
Zoo 2: Animal Park ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Zoo 2: Animal Park အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.23.0
ထုတ်လုပ်သူ upjers GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://upjers.com/mprivacy
App Name: Zoo 2: Animal Park
File Size: 91.04MB
Release date: 2019-07-12 17:17:13
လက်မှတ် SHA1: D8:37:E4:9F:FC:12:02:5D:05:B8:58:ED:EA:6E:A4:7F:D5:44:9E:75
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Klaus Schmitt
အဖွဲ့အစည်း (O): upjers GmbH und Co. KG
နယ်မြေ (L): Bamberg
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Bayern
Zoo 2: Animal Park APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ